Shasha yeNyambo, Alfred Kainga, Anowana Mukana weKuita Mitambo Yake muApollo Theatre muNew York
Kurume 16, 2022
Chizvarwa cheZimbabwe chinoita mitambo yenyambo, Alfred Kainga, uyo akatandadza vanhu zvinonwisa mvura kuApollo Theater iri muNew York kutanga kwemwedzi uno.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reDallas mudunhu reTexas muAmerica chinoita mitambo yenyambo kana kuti comedy, Alfred Kainga, chakasimudza mureza wenyika kuenda pamusorosoro mushure mekuita mutambo wacho mumuzinda wemitambo unozivikanwa pasi rose, weApollo Theater, uri muNew York.
Kainga aive mumwe wechikwata chevanhu vekuAfrica vakatandadza vanhu muApollo Theater mukutanga kwemwedzi uno chaisanganisira Akintunde, Marcela Onyango, naYedoye Travis.
Nekuda kwekukanda nyambo dzaidambura mbabvu nekutsetsa, varongi vemitambo pamuzinda uyu vakamukoka zvakare kuti adzoke musi wa 02 mwedzi unouya.
Apollo Theater ine nhoroondo huru kwazvo munyaya dzemitambo yakasiyanasiyana uye vatambi vane mukurumbira pasi rose vakawanda vatandadza vanhu imomo.
Kainga akazvarirwa mumusha weMbare muHarare umo akatanga zvekutsetsa vanhu achiri mudiki kwazvo.
Akazosimudza tarenda rake iri ave kuita zvidzidzo zvesekondari paPrince Edward School muHarare makare.
"Ini ndiri mukomana akabarwa kuHarare kuMbare. Ndokwandakakurira ndichirerwa naAmai nanaMbuya naSekuru nemhuri yese, eeh, yekwaMuzamhindo kunova kwandakarerwa. Ndokumba kwaanaMai vangu kwemadzisekuru angu. Saka ndakakurira muMbare, ndikadzidza kuChitsere Primary ndakazokurawo ndakaenda kuPrince Edward School.
"Saka haa, ndakange ndiri mukomana wesasi ka, coz kana wakakurira muMbare waifanirwa kunge uri wezvibhakera, kana wechitsotsi, kana webhora, kana wekutaurisa. Saka isu takawanikwa tiri kudandaro rekutaurisa, ndokwatakanga tiri tichingosekesa vanhu so. Taive vemorari," anodaro Kainga achiseka.
Muna 2001, Kainga akazosimuka achiuya kuno kuAmerica uko akasvikogara muDallas kuTexas kunove kwaachiri nanhasi.
Mukomana uyu aita mitambo yakawanda kwazvo uye atenderera nyika dzakawanda achiita mitambo yake kusanganisirawo kuZimbabwe.
Kainga anoti ari kubatsira zvakanyanya vechidiki vekuZimbabwe vari kuitawo zvemitambo seyake, uye kuvawanisa mikana yekuti vapindewo munzvimbo dzinorema.
Kusvika pari nhasi akwanisa kubatsira vakomana vaviri nekuvaendesa kuAmerica kuti vange vachipindawo muAmerica kuti vawedzera mikana yavo, yuye mumwe wetatu ari munzira kuendawo kunze kwenyika.
HURUKURO NA ALFRED KAINGA